Xal Free in ay gurmad iyo soo celin telefoon daaqadaha
Haddii aad tahay nooca in qofka jantay xogta aad xasaasi ah ee aad taleefan ama si uun aad qabto kuwa xiriirada iyo files muhiim kaydiyaa telefoonka, ka dibna aad u ogoleyn doonaa in la abuuro dib u ah macluumaadka sida waa arrin muhiim ah. Dadka isticmaala telefoonka daaqadaha waxaa jira siyaabo aad u fiican oo bilaash ah qaar ka mid ah in ay dib u kor xogta la micno ah in aad naftaada ku badbaadin karto madax xanuunka ka mid ah laga badiyay xogta muhiimka ah iyadoo kharashka ay aad u yar yahay. Waxaan eegno laba hab oo aad u hufan ee helitaanka xogta aad meel ammaan ah u soo kabasho aayaha dambe.
1. Xiriirada + Message kaabta in Card SD.
2. Dib ugu Phone in ay Cloud.
3. Back Up Media Faylal ay la Mobiletrans Wondershare.
1.Contacts + Message gurmad in kaarka SD.
Hadda ka hor, dadka isticmaala telefoonka Microsoft Windows dib laga yaabo xogta ay la isticmaalayo Bedelka aan app Data laakiin waxaa jira doorasho cusub in uu ku koray ay guushu. The xiriirada + fariin gurmad app waa xal cusub oggolaanaysa in dadka isticmaala dib ugu soo celin iyo xog muhiim ah. Sidaas, sidee ayaad u isticmaali app this?
Sida loo dib Xiriirada iyo Farriimihiisa Isticmaalka xiriirada + fariin gurmad app
Waxaad u baahan doontaa in aad kaarka nadiif ah SD si loo hubiyo in hannaanka dib taag darnaan ma aha. Nadiifi ee dareenka ah in bilaash ah furin waa in ay noqon waaba intaasoo aad naftaada ka heli badiyay xogta ka card SD ah.
Waxaad heli doontaa si loo soo dajiyo xiriirrada + fariin gurmad app ka dukaanka Microsoft oo ku xidh in aad telefoonka ka hor inta this shaqeyn karaan. FG dib markii la rakibey, waxaad u baahan doontaa si aad u hesho interface ee goobaha ay qaybta-kale Chine waxaa sida caadiga ah laga helo Chine ee qaybta.
Marka aad ku sugan tahay goobaha, waa in aad si fudud u rogto iyo magac app ee markaas ku raacsan shuruudaha ruqsad in ay ku talaabsato qalabka.
Riix kaabta doorasho in la sii wado in waxyaabaha aad jeclaan lahayd in ay ku kaydi kaarka SD ah. Saddexda doorasho ee ay bixiso app this waa SMS, MMS iyo Xiriirada. Ka dib markii xulashada waxa aad jeclaan lahayd inaad ku kaydiso, guji kaabta
Geedi socodka bilaaban doona oo dhan waxaad u baahan tahay inaad samayso waa sugto dhowr daqiiqo maxaa yeelay, waxay si uu u joojiyo. Kadib markii geedi socodka dhamaato, waxaad ka heli doontaa folder la odhan jiray gurmad + celin folder in kaarka SD ah. SMS kaydin doonaa sida faylasha XML halka xiriirada lagu kaydin doonaa qaab VCF ah.
Sida loo soo celiya xoojiyaa Xogta laga Card SD ah oo isticmaalaya gurmad xiriirada + fariin App
Phone ayaa meesha aad rabto in la soo celiyo xogta waa in xiriirrada + gurmad fariin app-waa in uu iska cad noqon phone daaqadaha oo taageera app ah. Haddii uusan haysan qalab ka dibna aad u soo dejisan waa ka dukaanka.
Geli card SD ay ku jiraan gurmad ah + celin folder ama aad nuqul karaa galka telefoonka ka dibna tag goobaha iyo aad u hesho magaca app ka dibna riix ku soo celiyo . Riix waxyaabaha aad rabto in aad soo celin karaa dooran heer ay dib waxaa loo kaydiyaa oo guji soo celin sugi in geeddi-socodka.
2.Backup taleefanka si Cloud
Backing ilaa macluumaadka taleefanka si daruurtii waa suurto gal haddii aad socda daaqadaha 8 OS in aad telefoon. Waxaad noqon doontaa isticmaalaya Microsoft daruur ku kaydiso-xogta adeegga in karti loo kartaa saxiixay in Account Microsoft ay kula telefoonka. Waxa uu u suurtogelin doonaa si toos ah dib ugu of content sida sawiro, Contact History, List of Apps ku rakibnay, fariimaha qoraalka, gaadmada ah Mowduuca, goobaha App oo ugu cadcad IE. Mid ka mid ah si fudud isku dubaridi kara sida kuwan oo dhan waxaa lagu fuliyey gudaha gujinaya Settings ka dibna uu raaco System iyo xulashada kaabta .
Shiddo App iyo Settings Back up
In kaabta dooro Apps + goobaha noqon badhanka soo socda si ay gurmad Settings. Markaas, sanduuq badhanka soo socda si ay gurmad App
Shiddo kaabta Message
In kaabta , guji farriimaha qoraalka iyo shid button soo socda si ay gurmad fariin Text . Waxaad noqon kartaa hadii aadan rabin in dhamaan fariimaha ee si toos ah xoojiyaa ama aad si fudud u noqon kara sheekeysto dib off ee daaqadaha phone 8.
Dib aad sawiro iyo Videos in Cloud ah
Isku Waxaad samayn kartaa sawiro iyo videos. Just la xusho Photos + videos ka dibna sii wadi lahaa wax kasta oo aad doonaysaan. Waxaad dooran kartaa ma geliyaan si gab Uploads automatic. Dooro tayada wanaagsan iyo Best oo tayo leh.
Soo celinta Your Xogta laga Cloud ah
Si aad u soo celin xogta xoojiyaa, waxaad u baahan tahay in la raaco talaabooyinka soo socda:
Gal account Microsoft ah in aad loo isticmaalo si ay u abuuraan ilaa dhabarka.
Waxaad la keeneen in doonaa ikhtiyaarka ah in la soo celiyo taleefanka hadda la noqdo.
Doortay dhabarka ilaa aad rabto in la soo celiyo taleefanka ka soo celin karaa telefoonka iyo sugto nidaamka.
Chine ayaa maayo si toos ah rakibay laakiin waxaad u baahan doontaa inaad iyaga soo dajiyo ka mid ah liiska. Ku qor lambarka sirta ah ee xisaab email iyo bulshada xisaab warbaahinta si ay u reconfigure oo aad ku fiican tahay inuu ku soo bilowdo oo isticmaalaya telefoonka!
Back Up Media Faylal ay la Mobiletrans Wondershare.
Mobiletrans Wondershare waa kala iibsiga phone smart iyo hal-click iyo barnaamijka gurmad, taas oo aad ogolaanaysaa Photos gurmad, Videos, Music files telefoonka Windows in PC ee 1 click. Waa qalab gebi khatar la'aan iyo user-friendly ah. Waxaad kala soo bixi kartaa version maxkamad ka badhamada download hoos ku ah.
Taageerada 3000+ telefoonada socda Android, Windows, Nokia (Symbian) iyo macruufka.
Talaabada 1: Run Mobiletrans on PC Windows ah
Si aan ku bilaabo, rakibi oo ay maamulaan barnaamijka kala iibsiga telefoonka - Wondershare MobileTrans ku PC Windows ah. Dooranaysaa Back Up Your Phone ka fursadaha soo bandhigay.
Talaabada 2: Isku WinPhone ay u computer.
Fadlan ku xidha Phone Windows in computer via fiilooyinka USB. Sida caadiga ah Mobiletrans Wondershare aqoonsan doonaa Phone Windows si toos ah.
Talaabada 3: dib telefoonka bilow.
Mobiletrans Wondershare taageeri karaan in ay dib u soo kicin Photos, Videos, iyo Music files on Windows Phone in PC. Dooro noocyada file aad jeclaan lahaa in ay dib u riix oo Transfer bilow .
PS: Haddii aad rabto in aad u astaysto meesha aad gurmad folder. Si fudud riix menu on top saxda ah ee suuqa, ka dibna dooran "Settings" taas loo sameeyo. Guji "Browse" in ay doortaan goobta file aad doorato ka dibna guji "OK".
> Resource > Windows > Solutions Free in kaabta iyo Soo Celinta Windows Phone